ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် (Floating Panels နှင့် Solar Ink) ကိုပြောင်းလဲစေမည့်တိုးတက်မှုများ။ အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
TomàsBigordà | | လေစွမ်းအင်, Photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်
နေမှစွမ်းအင်ကိုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားများနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းဟူသောအတွေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်စပ်နေသော်လည်းလူသားများသည်ဤစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ကိုအသုံးချပြီးကတည်းက လွန်ခဲ့သောနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကသင့်အိမ်ကိုအလင်းရောင်ပေးရန်နှင့်အပူပေးရန်, ရေပူရနှင့်ချက်ပြုတ်။ လေနှင့်စပ်လျဉ်း။ လက်ရှိကြိတ်ခွဲစက်များသည် Don Quixote Cervantes တွင်ဖော်ပြပြီးသောသူများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများသည်နေနှင့်လေစွမ်းအင်ကိုအခြားသူများအကြားတစ်စုံတစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေခဲ့သည် ပိုမိုထိရောက်ပြီးအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုသာကျွန်ုပ်တို့အစဉ်အမြဲမေ့လျော့သွားရန်သွားရမည့်လမ်းကြောင်းများစွာရှိသည် အခြားစွမ်းအင်။ ရာနှင့်ချီသောကမ္ဘာအနှံ့ရှိသုတေသီများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများသည်ထိုစွမ်းအင်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်လုပ်ဆောင်နေကြသည်၊ ၎င်းသည်သူတို့၏အကြံဥာဏ်များဖြစ်သည်။
2 2. Photovoltaic မှင်
3 3. နှစ်ချက်ရဟတ်လေတိုက်တာဘိုင်
ယနေ့ဆီလီကွန်အခြေစိုက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်များသည်ကန့်သတ်ချက်အချို့ကိုခံစားနေရသည်။ ၎င်းတို့ကိုခဲနည်းသောပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်သည် ၎င်းကိုသဘာဝအားဖြင့်စင်ကြယ်ပြီးလိုအပ်သောပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းတို့သည်တောင့်တင်းခိုင်မာပြီးသူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်မှာအကန့်အသတ်ရှိပြီးအရွယ်အစားကြီးမားရန်ခက်ခဲသည်။ perovskites ဟုခေါ်တွင်အသစ်သောပစ္စည်းများ, ဖြေရှင်းရန်အဆိုပြုထားနေကြသည် သူတို့ကအပေါများဒြပ်စင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်ဤကန့်သတ် သူတို့ပိုမိုထိရောက်အောင်မြင်ရန်အလားအလာရှိသည်အဖြစ်နှင့်စျေးပေါ။
Perovskites တစ်ဖြစ်ကြသည် ပစ္စည်းများကျယ်ပြန့်အမျိုးအစား အော်ဂဲနစ်မော်လီကျူးများသည်အများအားဖြင့်ကာဗွန်နှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်တို့၏သတ္တုဖြင့်ခဲကဲ့သို့ခဲနှင့်ကလိုရင်းကဲ့သို့သောကလိုရင်းကဲ့သို့သောရာဇမတ်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ သူတို့နှင့်အတူရရှိသောနိုင်ပါသည် နှိုင်းယှဉ်လွယ်ကူခြင်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုသာမန်ထိရောက်သောနည်းဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်မည်သည့်ပုံသဏ္toာန်နှင့်မဆိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သောပါးလွှာ။ ပေါ့ပါးသောရုပ်ရှင်ဖြစ်လာသည်။ အလိုက်အထိုက်နေတတ်သည့်ရလဒ်နှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်.
သို့သော်၎င်းတို့တွင်အားနည်းချက်နှစ်ခုရှိသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ၎င်းတို့ကိုပေါင်းစည်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်သည် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု သက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ အခြား, သူတို့လေ့ကြောင်း တော်တော်မြန်မြန်ဖြိုဖျက် အစစ်အမှန်အခြေအနေများအတွက်။
2. Photovoltaic မှင်
perovskites များ၏ဤအားနည်းချက်များကိုဖြေရှင်းရန်အမေရိကန်အမျိုးသားပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဓာတ်ခွဲခန်းမှအဖွဲ့သည်၎င်းတို့အားကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ '' အောင်အကြောင်းပါသူတို့ကိုဖြစ်ခွင့်ပြု photovoltaic မှင် အော်တိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်။
ဤသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ် ဦး နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည် အလွန်ရိုးရှင်းသော pervoskite အိုင်အိုဒင်း၊ ခဲနှင့် methylammonium တို့ပါဝင်သည်။ ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်ဤအရောအနှောသည် crystals များအလွယ်တကူဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ သို့သော်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာရှည်တည်တံ့စေပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အဖွဲ့သည် crystal ဖွဲ့စည်းမှုကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည့်အခြေအနေများကိုရှာဖွေသည်။ ၎င်းတွင်ပစ္စည်းအချို့ကိုအခြားဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သောကလိုရင်းများဖြင့်အစားထိုးခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့ကို "အနုတ်လက္ခဏာအရည်ပျော်ပစ္စည်း" ဟုခေါ်သောအရာအားဖြေရှင်းခြင်းလျှင်မြန်စေနိုင်သည်။
Iowa Energy Centre မှအင်ဂျင်နီယာ Anupam Sharma နှင့် Hui Hu တို့၏အဆိုအရလေမီးစက်များ၏အခြေခံသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကန့်သတ်ထားသောအဓိကပြproblemsနာနှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်စွမ်းအင်ကိုမထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကြီးနှင့်ဒုတိယ၊ သူတို့ကတစ် ဦး ဖြစ်ပေါ်စေသည် လေ၌နှောင့်အယှက် ၎င်းသည်အခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ ၄ င်းတို့နောက်တွင်ရှိသည့်မည်သည့်မီးစက်၏စွမ်းအင်ကိုမဆို ၈ မှ ၄၀% အထိလျော့နည်းစေသည်။
သင်၏ဖြေရှင်းနည်းမှာ တစ်စက္ကန့်ရဟတ်ထည့်ပါတစ်ခုချင်းစီကိုတာဘိုင်မှသေးငယ်။ လေရဟတ်များအတွင်း၌ပြုလုပ်သောသူတို့၏စမ်းသပ်မှုများနှင့်စမ်းသပ်မှုများအရထပ်တိုးဓါးသွားများသည် ၁၈% အထိထုတ်လွှတ်သောစွမ်းအင်ကိုတိုးစေသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်နှင့်အတူတာဘိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် တတ်နိုင်သမျှအကျိုးရှိစွာနှစ်ဆရဟတ်ဒုတိယနေရာ၌ထားရန်မည်သည့်နေရာသည်မည်မျှကြီးမားသည်၊ မည်မျှကြီးသင့်သည်၊ မည်သည့်အခြေခံသည်ပုံသဏ္shouldာန်ဖြစ်သင့်သည်၊ ၎င်းသည်ပင်မလှည့်တန်းများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အတိုင်းသာလှည့်သင့်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ Ciel & Terre သည်ဖန်တီးရန်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် ရေပေါ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားအကြီးစား။ ၎င်းစနစ်ကို Hydrelio Floating PV ဟုခေါ်သည် ဘုံနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားများကြီးမားသောရေထုများပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် ရေကန်များ၊ ရေလှောင်ကန်များနှင့်ဆည်ရေပေးဝေမှုအတွက်ရေလိုင်းများနှင့်ဓာတ်ပုံစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်ရေကာတာများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်းနေရောင်ခြည်ဥယျာဉ်များအတွက်ရိုးရှင်း။ တတ်နိုင်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဖြတ်ဖို့မလိုပါဘူး သူတို့ကိုပိုပြီးအသုံးပြုမှုပေးရန်။
ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ၎င်းတို့သည်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ပြီးဖြုတ်တပ်နိုင်သည်။ မတူညီသောလျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းမှုများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လေးလံသောပစ္စည်းကိရိယာများသို့မဟုတ်ကိရိယာများ။ ဤအမျိုးအစား၏ပထမဆုံးအဆောက်အအုံများကို United Kingdom နှင့် Japan တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » လေစွမ်းအင် » ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုပြောင်းလဲစေမည့်တိုးတက်မှုများ (Floating Solar Panels နှင့် Solar Tinta)
Donald Trump ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲဆန့်ကျင်တစ်ခုအမိန့်ထုတ်ပေးသည်